လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေ တဲ့ လူငယ်တွေ ကို အပြစ်မမြင်ဘဲ အကောင်းဘက်က တွေးပေးကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ G FATT – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေ တဲ့ လူငယ်တွေ ကို အပြစ်မမြင်ဘဲ အကောင်းဘက်က တွေးပေးကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ G FATT
လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေ တဲ့ လူငယ်တွေ ကို အပြစ်မမြင်ဘဲ အကောင်းဘက်က တွေးပေးကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ G FATT
အဆိုတော် G Fatt ကတော့ တေးသီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရေးသားသီဆိုနေတဲ့ လူငယ်တေးသံရှင် တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ပီပီ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာ အခန်းကဏ္ဍကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ G Fatt ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးက လေးစားနေကြတာပါ။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာတွေဟာ အလွန်ကို နည်းပါးနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အချို့လူတွေက Generation Z တွေကို အထင်မြင်လွဲမှားနေကြတာပါ။ ဒီအကြောင်းအရာ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ G Fatt က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်နေတဲ့ လူငယ်တွေကိုအပြစ်မမြင်ဘဲ အကောင်းဘက်က တွေးပေးကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” နည်းနည်းပင်ပန်းလို့ ခဏနားတာ​တော့ရှိမယ် ​သွေး​အေး​နေတာမဟုတ်ဘူး ။
လူ​တွေ အသလွတ်သတ်​နေလို့ ဘယ်နည်းလမ်း​ကောင်းမလဲ ခဏစဥ်းစားတာလည်း ဖြစ်တယ် ။ ဒီမတရားမှုတွေအ​ပေါ် ​နေသားကျသွားစရာ အ​ကြောင်းမရှိဘူး။ လမ်း​တွေအဖယ်ခံရတိုင်း ရင်ထဲက မတရားမှု​တွေက လမ်း​တွေလို ရှင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး ။ ရပ်ကွက်ထဲက ဒလန်​ တွေလည်း မြဲမြဲမှတ်ထား ခင်ဗျားတို့လုပ်ရက်အတွက် ဘဝ​ပေး အသက်​ပေးလိုက်ရတဲ့ လူငယ်​တွေကိုယ်စား ကျန်တဲ့လူငယ်​ပေါင်းများစွာက ခင်ဗျားတို့ကိုဘယ်တော့မှကမ္ဘာမ​ကြေဘူး ။ ​ခေါင်းကိုချည်းတည်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့သူ​တွေလည်း နောင်တစ်ချိန်ဘယ်အ​ကြောင်းပြချက်​ပေး​ပေး ကျွန်​တော်တို့ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ဆို​တော့ .. စည်းလုံးမှုအားဟာအရှိန်မကျပါဘူး ။ ကန့်လန့်လိုက်တိုက်မယ့် လူကြီး​တစ်ချို့ရှိ​ပေမယ့် တစ်ကယ်အားတက်သ​​ရော ပါဝင် ကြတဲ့ လူကြီး​တွေလဲ ဒုနဲ့​ဒေးပဲဘယ်သူကန့်ကွက် ကန့်ကွက် ကျွန်​တော်တို့က ဒီမတရားမှု​တွေကို တွန်းလှန်မှာပဲ ။ ကျွန်​တော်တို့ GZ ​​တွေကို ကာကွယ်​ဖေးမမယ် ။ သူတို့​အောင်ပွဲအတွက် ကျွန်​တော်တို့ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ စဥ်းစားဝန်းရံမယ် ။အား​ပေး​ဖေးမမယ် ။ လူကြီးတစ်ချို့လည်း အမြင်​ပြောင်း​စေချင်တယ်
တစ်ခြားနိုင်ငံက လူငယ်တွေကို ​”တော်လိုက်တာ” “ထက်မြက် လိုက်ကြတာ” စသဖြင့် အားကျ ချီးကျူးဖူးတယ် မလား ? ကျွန်​​တော်တို့ဆီက က​လေး​တွေမှာလည်း အဲ့ထက်မ​လျော့တဲ့အရည်အချင်း​တွေရှိတယ် ၊ နိုင်ငံခြားသားတစ်​​ယောက် မြင်တိုင်း Auto အထင်ကြီးစိတ်ဝင်တဲ့ မျိုးဆက်မဟုတ်ဘူး ။ရင်​ဘောင်တန်းပြမယ့် မျိုးဆက်ဖြစ်တယ် ။ ဒီအ​ရေး​တော်ပုံ​အောင်လို့ ဒီမိုက​ရေစီရရင် ဒီနိုင်ငံကို သူတို့ လက်နဲ့ ဆွဲတင်ပြကြလိမ့်မယ် ။ ​စောင့်ကြည့်။ အဓိက​ပြောချင်တာက​တော့ က​လေး​တွေကိုအား​ပေးပါ ၊ ကာကွယ်ပါ ၊ ဝိုင်း​စောင့်​လျောက်ပါ။ ဦး​လေးတို့အ​ကြောက်တရားနဲ့အန်တီတို့စိုးရိမ်စိတ်ကို ကျွန်​တော်တို့နားလည်ပါတယ် ။ ဒီပွဲမနိုင်နိုင်ဘူးလို့ ဦးတို့အန်တီတို့ ​ထင်​နေတာလည်း နားလည်ပါတယ် ။ ဒါ​ပေမယ့် ကျွန်​တော်တို့က လူငယ်​တွေပါ ကျွန်​တော် တို့မှာ ယုံကြည်ချက်​တွေ​ရော အနာဂါတ်​တွေ​ရော အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်စွမ်း​တွေ​​ရော တိုင်းပြည်ကိုချစ်စိတ်​တွေ​ရော အပြည့်ရှိတယ် ။ ” ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာကို ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိစေရန်အတွက် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
အဆိုေတာ္ G Fatt ကေတာ့ ေတးသီခ်င္းေတြကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးေရးသားသီဆိုေနတဲ့ လူငယ္ေတးသံရွင္ တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ပီပီ အမွန္တရားဘက္ကေန ရပ္တည္ၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ရာ အခန္းက႑ကေန ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့ G Fatt ကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အားလုံးက ေလးစားေနၾကတာပါ။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကတာေတြဟာ အလြန္ကို နည္းပါးေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူေတြက Generation Z ေတြကို အထင္ျမင္လြဲမွားေနၾကတာပါ။ ဒီအေၾကာင္းအရာ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ G Fatt က သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြကိုအျပစ္မျမင္ဘဲ အေကာင္းဘက္က ေတြးေပးၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ” နည္းနည္းပင္ပန္းလို႔ ခဏနားတာ​ေတာ့ရွိမယ္ ​ေသြး​ေအး​ေနတာမဟုတ္ဘူး ။
လူ​ေတြ အသလြတ္သတ္​ေနလို႔ ဘယ္နည္းလမ္း​ေကာင္းမလဲ ခဏစဥ္းစားတာလည္း ျဖစ္တယ္ ။ ဒီမတရားမႈေတြအ​ေပၚ ​ေနသားက်သြားစရာ အ​ေၾကာင္းမရွိဘူး။ လမ္း​ေတြအဖယ္ခံရတိုင္း ရင္ထဲက မတရားမႈ​ေတြက လမ္း​ေတြလို ရွင္းသြားမွာမဟုတ္ဘူး ။ ရပ္ကြက္ထဲက ဒလန္​ ေတြလည္း ၿမဲၿမဲမွတ္ထား ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္ရက္အတြက္ ဘဝ​ေပး အသက္​ေပးလိုက္ရတဲ့ လူငယ္​ေတြကိုယ္စား က်န္တဲ့လူငယ္​ေပါင္းမ်ားစြာက ခင္ဗ်ားတို႔ကိုဘယ္ေတာ့မွကမာၻမ​ေၾကဘူး ။ ​ေခါင္းကိုခ်ည္းတည္ပစ္ခဲ့ၾကတဲ့သူ​ေတြလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္ဘယ္အ​ေၾကာင္းျပခ်က္​ေပး​ေပး ကြၽန္​ေတာ္တို႔ခြင့္လႊတ္မွာမဟုတ္ဘူး ။ ဆို​ေတာ့ .. စည္းလုံးမႈအားဟာအရွိန္မက်ပါဘူး ။ ကန႔္လန႔္လိုက္တိုက္မယ့္ လူႀကီး​တစ္ခ်ိဳ႕ရွိ​ေပမယ့္ တစ္ကယ္အားတက္သ​​ေရာ ပါဝင္ ၾကတဲ့ လူႀကီး​ေတြလဲ ဒုနဲ႔​ေဒးပဲဘယ္သူကန႔္ကြက္ ကန႔္ကြက္ ကြၽန္​ေတာ္တို႔က ဒီမတရားမႈ​ေတြကို တြန္းလွန္မွာပဲ ။ ကြၽန္​ေတာ္တို႔ GZ ​​ေတြကို ကာကြယ္​ေဖးမမယ္ ။ သူတို႔​ေအာင္ပြဲအတြက္ ကြၽန္​ေတာ္တို႔ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် စဥ္းစားဝန္းရံမယ္ ။အား​ေပး​ေဖးမမယ္ ။ လူႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕လည္း အျမင္​ေျပာင္း​ေစခ်င္တယ္
တစ္ျခားႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြကို ​”ေတာ္လိုက္တာ” “ထက္ျမက္ လိုက္ၾကတာ” စသျဖင့္ အားက် ခ်ီးက်ဴးဖူးတယ္ မလား ? ကြၽန္​​ေတာ္တို႔ဆီက က​ေလး​ေတြမွာလည္း အဲ့ထက္မ​ေလ်ာ့တဲ့အရည္အခ်င္း​ေတြရွိတယ္ ၊ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္​​ေယာက္ ျမင္တိုင္း Auto အထင္ႀကီးစိတ္ဝင္တဲ့ မ်ိဳးဆက္မဟုတ္ဘူး ။ရင္​ေဘာင္တန္းျပမယ့္ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္တယ္ ။ ဒီအ​ေရး​ေတာ္ပုံ​ေအာင္လို႔ ဒီမိုက​ေရစီရရင္ ဒီႏိုင္ငံကို သူတို႔ လက္နဲ႔ ဆြဲတင္ျပၾကလိမ့္မယ္ ။ ​ေစာင့္ၾကည့္။ အဓိက​ေျပာခ်င္တာက​ေတာ့ က​ေလး​ေတြကိုအား​ေပးပါ ၊ ကာကြယ္ပါ ၊ ဝိုင္း​ေစာင့္​ေလ်ာက္ပါ။ ဦး​ေလးတို႔အ​ေၾကာက္တရားနဲ႔အန္တီတို႔စိုးရိမ္စိတ္ကို ကြၽန္​ေတာ္တို႔နားလည္ပါတယ္ ။ ဒီပြဲမႏိုင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဦးတို႔အန္တီတို႔ ​ထင္​ေနတာလည္း နားလည္ပါတယ္ ။ ဒါ​ေပမယ့္ ကြၽန္​ေတာ္တို႔က လူငယ္​ေတြပါ ကြၽန္​ေတာ္ တို႔မွာ ယုံၾကည္ခ်က္​ေတြ​ေရာ အနာဂါတ္​ေတြ​ေရာ အမွားအမွန္ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း​ေတြ​​ေရာ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္စိတ္​ေတြ​ေရာ အျပည့္ရွိတယ္ ။ ” ဆိုၿပီး ေရးသား ထားတာကို ပရိသတ္ေတြလည္း သိရွိေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။
Previous post လူထု လှုပ်ရှားမှုများတွင် မပါဝင်ဘဲ နဲ့တောင် ကျဆုံး ခဲ့ရတဲ့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေ အတွက် ရင်ကွဲမတတ် ခံစားနေရတဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်
Next post တစ်ကမ္ဘာလုံး ကို သိမြင်စေ ခဲ့တဲ့ SILENT STRIKE မှာ ပါဝင်ပြီး ပြည်သူတွေ နဲ့ တစ်သားတည်း ရပ်တည် ခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ